ग्रीन टीस् किन, कसरी, कति र कहिले पिउने ? - कृषि पत्रिका
ग्रीन टीस् किन, कसरी, कति र कहिले पिउने ?
आइतबार १३ फागुन, २०७४	comments
एजेन्सी । अहिले नेपाली समाजमा पनि ग्रीन टी पिउने प्रचलन व्यापक बन्दैछ । खासगरी स्वास्थ्यप्रति सचेत बर्गले आफ्नो जिब्रोलाई ग्रीन टीमा अभ्यस्त गराउँदैछन् । दुध, चिनी र कमसल गुणस्तरको चियामा बानी परेका हामीलाई ग्रीन टीमा रस भिज्न अलि समय लाग्छ ।
धेरैजसो बलिउड सेलिब्रेँ नियमित रुपमा ग्रीन टी पिउने गरेका छन्, तन्दुरुस्ती र सौन्दर्यका लागि । कति नेपाली सेलिव्रेँले पनि यसलाई आफ्नो नियमित खुराक बनाउने गरेका छन् ।
एन्टिअक्सिडेन्टको एकदमै राम्रो स्रोत हो, ग्रीन टी । यो एन्ँ अक्सिडेन्टल स्वास्थ्यका लागि एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । स्वास्थ्य र सौन्दर्य दुबैको लागि लाभदायक मानिन्छ । ग्रीन टीमा यस्तो पोषक तत्व पाइन्छ, जसले शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ ।
यसमा एपिगलोकेटेशिन-३ गलेट पाइन्छ, जसले क्यान्सरको कोशिकालाई बढ्न दिदैन । रक्तचाप नियन्त्रण गर्नका साथै शरीरमा बोसो जम्न नदिन पनि यसको खास भूमिका हुन्छ ।
किन पिउने र ?
दीर्घ रोग, जस्तै उच्च रक्तचाप, मधुमेह नियन्त्रणका लागि एकदमै उपयोगी हो ग्रीन टी । अध्ययनहरुमा के पनि पाइएको छ भने, ग्रीन टीले क्यान्सरको जोखिम २५ प्रतिशतसम्म कम गर्छ । शरीरको खराब कोलोस्टोर नियन्त्रणमा ग्रीन टी लाभदायक हुन्छ । पाचन यन्त्रलाई तन्दुरुस्त राख्नदेखि छालालाई नरम र चम्किलो बनाउनसम्म ग्रीन टी उपयोगी हुन्छ । तौल नियन्त्रणका लागि समेत ग्रीन टी पिउन सकिन्छ ।
कोरोना असर : ह्वात्तै बढ्यो तरकारी र फलफूलको मूल्य
सामाजिक दुरी कायम गरी तरकारी बिक्रीवितरण
लकडाउनमा ताजा तरकारी पाइएन : फोन गर्नुस् चोकमा आइपुग्छ
कोरोना असर : दूध ढुवानी ठप्प
दूध, तरकारी, पशुपंछी ढुवानी गर्न पाइने
खाद्यान्न, तरकारी र दूध पसल खोल्नू